छोरो केपी ओलीले फेरि पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउँछः ज्योतिषी बाबु मोहनप्रसाद! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > छोरो केपी ओलीले फेरि पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउँछः ज्योतिषी बाबु मोहनप्रसाद!
काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीकोक कामले गृहजिल्ला पुगेका थिए ।
त्यो बेलामा उनले आफ्ना बुवा मोहनप्रसाद ओलीलाई पनि भेटे । पुर्वप्रधानमन्त्री ओलीका बुवा भविष्य अनुमान गर्ने ज्योतिष विद्या पनि जान्दछन् । प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीका बुवा मोहनप्रसाद ओलीले आफ्नो छोराले पुनः पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउने भविष्यवाणी गरेका छन् ।
गृह जिल्ला झापामा रहेका बुवा मोहनप्रसादलाई भेट्न ओली आइतबार पुगेको बेलामा उनका बुवाले यस्तो भविष्यवाणी गरेका थिए । छोरालाई भेटेपछि मोहनप्रसादले सञ्चारकर्मीसँग छोटो कुराकानी पनि गरेका थिए । उनले कुराकानीमा आगामी चुनावमा आफ्नो छोराले जितेर पुनः ५ वर्ष एकलौटी सरकार चलाउने दाबी गरे ।
आफ्नो छोरा अझैँ २० वर्षसम्म स्वस्थ रहने बताउदै ९० वर्षीय मोहनप्रसादले छोरा ओलीलाई षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएको पनि बताए । उनका अनुसार ओलीलाई जनताले फेरि सत्तामा पुर्‍याउछन् र पाँच वर्ष सरकार चलाउँछन् ।